Yedu Fekitori - Nanchang Yakasimbiswa Carbide Yakatemerwa Dhizimusi Kambani
Solid Carbide Tsvimbo
Carbide Matanda ane inotonhorera gomba
Carbide Matanda ane Helix Mbiri Makomba
Zvishandiso zveTungsten Carbide
CNC Carbide Inoisa
Tungsten Carbide Discs & Vakaona mashizha
Tungsten Carbide Yakagadziriswa Zvikamu
Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company (NCC) ikambani inodzorwa nehurumende, iyo yakatanga kubva ku603 Plant yakavambwa muna Chivabvu 1966. Yakatumidzwa zita rekuti Nanchang Cemented Carbide Plant muna 1972. Yakabudirira kugadzirisa chimiro chemuridzi muna Chivabvu 2003 kuti chisumise zviri pamutemo. Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company.It inonyatsotungamirwa neChina Tungsten High Tech Zvishandiso Co, Ltd. Uye zvakare musimboti unotsigira bhizinesi reChina Minmetals Boka Co, Ltd.
Mukutakura cheni yakazara yeindasitiri kubva kuTungsten mbishi yekugumisa maturusi ekugaya, NCC ndeimwe yemabhesiki makuru anosanganisa kugadzirwa, manejimendi uye kutumira kunze kwezvinhu zve tungsten upfu zvigadzirwa, zvakaomeswa carbide tsvimbo, uye maburi ekugadzirisa maturusi muChina, zvigadzirwa zvawo zvave zvinowanzoshandiswa mukugadzira simbi, michina, mota, muchadenga, geological kuchera, zvemagetsi, nezvimwe.
Mushure memakore anopfuura makumi mashanu ebudiriro, kambani yasvika pagore yekugona inokwana zviuru zvina zvematani eupfu we tungsten uye tungsten carbide powder, matani chiuru esimbi yesimbi carbide uye zvimwe zvigadzirwa, mamirioni gumi seti yemasementi e carbide hole machining ekucheka maturusi. NCC ine vashandi makumi matanhatu nevatanhatu uye mari yakanyoreswa yeRMB 279.4 miriyoni.
Enterprise Mweya: Shumira vatengi nekushanda nesimba
Kukunda ramangwana nemhando
Yakavimbiswa uye Yakashambadzirwa:
Isu tinoteerera zvakanyanya pahunhu hwezvigadzirwa zvedu. Unogona kugara uchivimba nemhinduro dzedu. Iyo ISO 9001 standard inoratidzira izvo zvishoma zvinodiwa kune yemhando manejimendi system. Kubva pane izvi, isu tinoramba tichiwedzera maitiro edu emukati. Nenzira iyi isu tinokuvimbisa iwe yakanakisa muhunhu hwechigadzirwa, kugadzirwa uye kukwikwidza. Tine kuongororwa kwakajairika kunoitwa kuratidza izvi.
NCC inonyatsoshandisa iyo ISO 9001: 2015 mhando manejimendi manejimendi, uye inoshandisa vese vashandi mhando yemutoro mutoro system yekuona inoenderera uye inoshanda sevhisi kune vatengi.
● Kuongorora zvinhu uye kubvumidzwa
● Kuongorora kwekuyera uye tendero
● Chitupa chekushandisa chakapihwa pachikumbiro
● Muenzaniso wevatengi ongororo inowanikwa
Tine zvigadzirwa zvemberi uye mainjiniya ane ruzivo, uye chigadzirwa chega chega chinoyedzwa mukati mekugadzirwa kwaro kutenderana nezvakatemerwa kare.
Yedu yehutano vimbiso sisitimu inovimbisa kuti chete zvigadzirwa zvakanakisa zvinogona kuendeswa kune vatengi vayo uye zvese zvinotakurirwa zvinogara zviri panguva.
Yedu Yekutsvagisa & Yekuvandudza Dhipatimendi inogara yakazvipira mukuita kugona kwavo kwehunyanzvi mune epamberi matekinoroji uye zvigadzirwa kuti zvirinani kushandira zviripo uye zvenguva yemberi zvido zvevatengi. NCC yaigara ichichengetedza chinzvimbo chemberi muhunyanzvi hweR&D kugona muChina, uye yakave nepurovhinzi-nhanho tekinoroji nzvimbo, pamwe nekuwongorora uye nzvimbo yekuyedza, iine vashandi ve112 vakabata mazita ehunyanzvi uye ehunyanzvi, dhigirii raTenzi kana pamusoro.
NCC yakagadza rabhoritari yehunyanzvi kuyedza zvivakwa uye ma parameter e tungsten carbide powder uye tungsten carbide alloys, nyanzvi yerabhoritari mune chishandiso yekugaya bvunzo yekuita yekuenzanisa yekugaya bvunzo pane dzakasiyana siyana simende carbide zvinhu.
NCC ine purovhinzi-lever tekinoroji nzvimbo, iyo yakapinda mukudzokorora uye kuumbwa kwematanho gumi nemaviri emunyika yakawana gumi nematanhatu mvumo, kusanganisira matatu ekugadzira patent uye gumi nemashanu ekushandisa modhi patent.
Zvichakadaro, Isu takamisa kwenguva refu uye yakatsiga tekinoroji kubatana pamwe akakosha mayunivhesiti uye anozivikanwa masainzi ekutsvagisa.
Nechinangwa chekusangana nevavanotarisana navo, isu tiri kutsvaga nzira dzekuvandudza nekugadzira maturu ekucheka maturusi ayo anoderedza mutengo uye nekuwedzera kugadzirwa, kunyangwe kune akaomesesa mamiriro.
KuNCC, maitiro ekugadzira akazara uye akaenzana, kubva pakanatswa poda mbishi kusvika pekupedzisira sintered blanks.
Hapana kuedza kunodzivirirwa kuR & D Dept, uye kambani izere inoshanda kupa sintered blanks inowedzera kugadzirwa, inoderedza mutengo wevatengi uye inobatsira kugadzira zvigadzirwa zvakavimbika.
KuNCC, tinosimbirira kuti hutano nekuchengetedzeka kwevashandi vedu zvakakosha uye zvine pekutanga kumusoro uye tinoumba hwaro hwezviito zvedu. Isu takazvipira kune yekuchengetedza nharaunda uye manejimendi anoitwa zvine mutsindo zvinoenderana neIO 14001 Environmental Management System.
Azvikuya Cutter, Cemented Carbide, Carbide Kucheka Maturusi, Yakasimba Carbide End Mills, Carbide Zvishandiso, Yakasimbiswa Carbide Endmill,